Mogadishu Journal » Ganacsade Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koofur Afrika
Mjournal :-Koox burcad Koofur Afrikaan ah ayaa xalay Magaalada Johannesburg waxay ku dileen muwaadin Soomalaiyeed oo ku ganacsanayay dalka Koofur Afrika.
Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Nuur Dheere ayaa waxaa toogtay Koox Burcad Koofur Afrikaan ah, isagoo ka sii baxayay xaruntiisa shaqo xilli uu ku sii jeeday hoygiisa.
Ciidamada Booliska oo goobta tagay uu dilka ka dhacay, kuwaasoo goobta ka qaaday Meydka Marxuumka, iyagoo la’aaday goobaha wax lagu baaro, waxaana la filayaa in maanta gelinka dambe lagu aaso Qabuuraha Muslimiinta ah.
Koofur Afrika waxaa joogto ka noqotay dilalka loo geysanayo ganacsatada Ajaanibta ah ee u badan Soomaalida, mana jirto Siyaasad cad oo dowladda Koofur Afrika ay ku wajaheyso arintaas, iyadoo Safaarada Soomaaliya ee dalkaasina ay noqotay mid aan waxba ka qaban dhibaatooyinka loo geysanayo dadka Soomaaliyeed.
Ilhaan Cumar oo sheegtay in dil loogu hanjabay